Waxa laga yeelayo XAJKII sanadkan & Sucuudiga oo soo bandhigay lacagta kasoo gasha Xajka & Cumrada? (Laba qodob oo miiska saaran) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Waxa laga yeelayo XAJKII sanadkan & Sucuudiga oo soo bandhigay lacagta kasoo...
Waxa laga yeelayo XAJKII sanadkan & Sucuudiga oo soo bandhigay lacagta kasoo gasha Xajka & Cumrada? (Laba qodob oo miiska saaran)
(Riyaad) 09 Juun 2020 – Dalka Saudi Arabia ayaa si wayn u dhimaya tirada sanadkii kasoo qaybgeli jirtey Xajka si uu u dhimo faafitaanka coronavirus xilli kiisas gaaraya 100,000 halkaa laga diiwaan geliyey, sida ay ogaatey Reuters.
Ilaa 2.5 milyan ayaa sanadkii booqata masjidyada iyo meelaha barakaysan ee Sucuudiga ee Maka iyo Madiina, waxaana lasoo saaray lacagta Sucuudigu ka qabto Xajka iyo Cumrada oo sanadkii gaaraysa $12 bilyan oo doollar.
Saudi Arabia oo bishii Maarso hakiyey dadkii Cumraysanayey ilaa amar dambe, ayaa hadda la sheegay inuu ogolaan doono inay sanadkan Xajka kasoo qayb galaan “lambarro tusaale uun ah”, iyada oo aan la ogolaan doonin dadka waayeelka ah, isla markaana tirada oo idil lagu koobi doono 20% ka mid ah tiradii ka iman jirtey dal walba, sida ay sheegayaan ilo ku dhow nidaamka dalka.
Yeelkeede, waxaa jira qaar ka mid ah madaxda Sucuudiga oo soo jeediyey in gebi ahaanba la joojiyo Xajka oo sanadkan ku beegan dabayaaqada bisha Luulyo ee soo aaddan, balse dowladdu weli taa kama hadal.
Sucuudiga oo ay saliiddii ku jabtay ayaa duullimaadyada caalamiga ahaa joojiyey bishii Maarso, yeelkeede, weli xaalku ma fadhiyo oo Jimcihii waxaa bandow hor leh la saaray magaalada Jiddah, kaddib markii ay kasoo bexeen caabuqyo cusus oo Covid-19 ah.
Sucuudiga ayaa dakhli aanad malayn karin, ayaa doonaya inuu hirgeliyo isbedello dhaqaale oo uu hindisey Mohammed bin Salman kaasoo doonaya in Xajka iyo Cumrada oo ay sanadkii hore kasoo qayb galeen 26 milyan uu gaarsiiyo 30 milyan sanadkii marka la gaaro 2030, goortaasoo ay Sucuudigu sanadkii Xajka ka heli doonaan dakhli dhan 50 bilyan oo riyaal ($13.32 bilyan oo doollar).
Previous article”Sirte waa la idiin bannaynayaa balse dagaalka joojiya!” – Masar & Imaaraadka oo keenay hindise naf-la-caari ah oo ay ku badbaadinayaan Xaftar
Next articleQUBANAHA HADALSAME: Warar xiise leh oo ku saabsan Soomaalida & caalamka (Tebintii Maxamed Xaaji)